Bọket anyị na-egwupụta ihe — Mee ka ọ ghara ịdịgide adịgide
XUZHOU MINYAN Bubata & Mbupụ CO., LTD. emi odude ke kasị ewu ewu na-ewu ígwè ígwè ọrụ obodo Xuzhou, China. Dị ka a ọkachamara ewu ígwè na akụkụ ahụ mapụtara ekspootu, Minyan nwere ọtụtụ afọ ahịa ahụmahụ na-ewu ígwè na China, anyị nwere otutu ahụmahụ na reso ...GỤKWUO »
Kedu ihe bụ nhazi na ọrụ nke bọket
Ndị na-egwupụta ihe na-arụ ọrụ n'oge dị iche iche ma họrọkwa ngwa ọrụ ngwa ngwa dị iche iche, ngwa ndị a na-ahụkarị dịka bọket, ndị na-emebi emebi, rippers, hydraulic clamps wdg. Naanị site na ịhọrọ ngwa kwesịrị ekwesị, anyị nwere ike ịnweta oke ọsọ na ike ọrụ ọrụ maka va ...GỤKWUO »
Kedu ihe bụ ngwongwo na ojiji nke ịwụ
Wụ na-ezo aka na otu ịwụ ahụ eji gwupụta ihe ndị rụrụ arụ dịka ala, aja aja, nkume na mkpofu ihe owuwu. Ihe mejupụtara ya bụ efere ala, efere mgbidi, efere ntị, ntị ntị, efere ezé, efere akụkụ, na ezé ịwụ. Ọ bụ ụdị ngwaọrụ ọrụ ...GỤKWUO »